Ukugezwa komuntu – iAfrika
Ukuphila komuntu akugcini nje ngokuphila kwakhe esaphila ngokwemnyama emhlabeni lapho isahlangane nomphefumulo futhi ebonwa ngabantu aphila nabo. Umuntu ngisho esedlulile emhlabeni inyama isihlukene nomphefumulo usuke esaphila ngokomoya. Nalapho ngisho esedlulile umuntu emhlabeni siyaqhubeka sibe nobudlelwano naye ngoba phela usuke eseyidlozi esibhekile futhi esivikelile thina esisaphila, yingakho ngisho kuthiwa umuntu ube wuhlupho olungakanani esaphila kodwa uma engasekho emhlabeni akabe esabandlululwa ngokuthi ubekade ephila impilo enjani. Lana-ke sithinta udaba lwesithunzi somuntu ongasekho emhlabeni, lowomuntu kungabe udlule emhlabeni ngokwengozi noma ngokwesifo.
Umuntu uyagezwa, noma-ke singasho ukuthi umuntu ongagezwanga uza namathunzi amnyama kepha siveza ukuthi uma loyomuntu odlule emhlabeni engagezwanga emzimbeni wabakubo noma emzimbeni walowo abehlekisana naye okungaba umkhwenyana, unkosikazi, ingoduso noma-ke umuntu abesethandane naye isikhathi eside behleli ndawonye; lokho kungalethela labo bantu ithunzi lobumnyama babe namashwa nezinto zabo zingabahambeli kahle empilweni.
Umuntu uyagezwa noma ngabe ngowesilisa noma ngowesifazane. Uma umuntu egezwa kwenziwa umsebenzi ekhaya kuhlatshwe isilwane, noma umuntu agezwe ngokuthi kusetshenziswe amakhambi esintu.
Kuqala ngokukhunyulwa kwenzilo
Ngemuva kokudlula komuntu emhlabeni kulindwa izinyanga ezimbalwa, ngokujwayelekile okuba yizinyanga eziyisithupha kuya phambili, bese-ke umuntu lowo enzelwa umsebenzi. Kodwa-ke kuqalwa ngomsebenzi wokukhumula inzilo kulaba akade bezilile, wona okuba wumsebenzi omncane wembuzi. Lapho kusuke kubikwa nje ukuthi njengoba kade kudlule usibanibani emhlabeni wazilelwa, ngalolo suku isuke isikhunyulwa inzilo obekuzilwe ngayo.
Ukugeza umuntu ngomsebenzi wesintu
Ngemuva kokukhunyulwa kwenzilo kwenziwa umsebenzi wenkomo. Kuhlatshwa imbuzi ukuwubika lo msebenzi futhi kuqalwe kwenziwe njengayo yonke imisebenzi yesintu ethinta abadala. Kuhle-ke sikubalule ukuthi lomsebenzi wenkomo kusuke kugezwa yena lo ongasekho ukuze angabi yidlozi elibi ekhaya elifika namathunzi amnyama aphethukisa izinto ekhaya zibe mapetukwane. Laba-ke abawumndeni wakhe bona bagezwa ngomuthi wesintu ngaphandle kwasekhaya. Lokho kwenzelwa ukuthi uma bengena ekhaya kube wukuthi lomuntu ubedlule ngesikhali noma ngengozi lowo mkhokha babe sebewushiye ngaphandle komuzi. Bageza ngentelezi evala umkhokha omubi wesikhali noma ingozi ekhaya.
Ukugeza umuntu ngokusebenzisa amakhambi
Ngokwalolu hlelo lokugeza, kuyiwa kwababonayo noma abalapha ngokwesintu. Lowo ofelwe unikwa amakhambi okususa ithunzi elimnyama. Lawo makhambi ngokujwayelekile kuba yintelezi yokugeza okugezwa ngayo. Kuyenzeka-ke kwesinye isikhathi kufakwe namakhambi okugquma futhi umuntu aphinde aphalaze ukuze kususeke isinyama. Kuyenzeka futhi amakhambi asetshenziswayo athakwe nobulawu ukuze impilo yalowo ogezwayo ichume.
Ngisho inkabi ebulala abantu iyagezwa
Ngithi angikuveze-ke ukuthi lena yokugeza ithunzi elimnyama ayigcini nje kumuntu olahlekelwe yilowo obewubambo lwakhe kuphela kodwa ngisho abenzi bobubi, sengisho phela izinkabi lezo ezibulala abantu, nazo ziyagezwa ngentelezi ukususa umoya walomuntu ezimkhiphe umphefumulo ngoba phela ithunzi lomuntu liyalandelana.
Kule ngosi-ke besisika elijikayo ekugezweni komuntu odlulelwe emhlabeni ilo abethandana naye, kuyahlukana ke ukwenza kwabantu ekugcineni amasiko esintu kanye nakho ukwenza kwemizi akufani kodwa ke leli yisiko elijwayelekile futhi abaningi abasakholelwa ekugcineni amasiko kaZulu basaligcina ngoba bayakwazi ukubaluleka kwalo.
8 thoughts on “Ukugezwa komuntu”
Ngicela ukubuza nabafana bayageza yini uma kade nishonelwe ekhaya noma kungeyena umzali wenu njengo mamkhulu noma abafowabo bobaba ?
Kugeza wonke umuntu wasekhaya
Ngicela ukubuza uma nashonelwa umfowabo kababa wenu kodwa eningahlali naye uma sekugezwa kufanele yini nani nigeze kanye nezingane zakhe noma kugeza izingane zakhe kuphela ?
Wonke umuntu uyageza ekhaya
ngicela ukubuza uma ulale nomuntu ongakagezwa mhlampe obeshonelwe umama uyaba yini nesinyama nawe?
Cofa lapha ukuthola ulwazi Ukuzila
Khuleke ekhaya, umbuzo wami uthi umama ma eshonelwa ubaba onengane naye kodwa sebahlukana ngokozothando omunye ngomunye esenomuzi wakhe, zimiswa kanjani ezokugezwa kuka mama nokwenzilo? Umsebenzi wonke nje uhlelwa kanjani nangokuthi silwane siphi esisetsheziswa ma egezwa?
Cela ningitholela umlando nezithakazelo zakwaKhawula